Vagadziri vemidziyo - China Zvigadzirwa fekitori & vatengesi
3D Yakazara Glue
3D Resin kumucheto
iPhone 12 dzakateerana Corning Go ...
Custom logo dzinopfavisa girazi ...
2.5D Anti Bhuruu Chiedza Hasha ...
2.5D High Clear Anti-Guruva T ...
Tsika logo logo girazi chigadzirwa
Yakasarudzika Logo Yakatsamwa Girazi
OTAO yakagadziriswa Logo girazi rakadzikama rinoshandisa akasiyana matekiniki ekuwedzera mapatani kana zvinyorwa iwe zvaunoda kugirazi redu rakapfava Nenzira iyi, zvigadzirwa zvako zvinogona kusiyaniswa kubva kune mamwe mabhureki. Unogona kupa vatengi vako girazi rakadzikama neLogo sechipo, kana iwe unogona kuseta mamwe mapatani ekukwezva vechidiki. Uye kana vatengi vakaiswa pamwe neyako Logo girazi, iri kusimudzira zita rako. Uye kana zvikaitika mushure-kutengesa, inoshandiswa zvakare seye-anti-fake dhizaini kuti uone kana chiri chigadzirwa chako.
iPhone 12 dzakateedzana 2.5D zvakavanzika zvinodzora girazi screen mudziviriri
Paunenge uchishandisa mbozhanhare isina zvakavanzika firimu, iyo skrini inokomberedza yekugovana skrini, saka iwe nevanhu vakatenderedza unogona kuona iyo skrini zvakajeka. Kana iwe ukaisa iyo OTAO yekuvanzika yakadzikama girazi pachiratidziri, ndeye yakasarudzika yekuvanzika skrini, iyo inogona kungoonekwa newe uye ruzivo rwechidzitiro harugone kuoneka kubva kudivi.
Samsung S21 Ultra UV Glue Yakatsamwa Girazi
Mhando dzemhando dzeSamsung, Huawei, Xiaomi, OPPO, uye VIVO zvese zvinoshandiswa yakakomberedzwa skrini ine rakakura rakakombama. UV Glue Yakatsamwa Girazi ine yakapa mashandiro akanaka uye dziviriro kwavari, ichiva mhando ye
girazi rakadzikama rakagamuchirwa nevakawanda nevatengi
360 Yakazara Kudzivirirwa Kwemuviri Combo ye iPhone 12
Ultra yakatetepa nhare mbozha ine chaiyo yekucheka inosanganisirwa neye yakakwira giredhi rakadzikama girazi, inopa 360 degree kuzara kwemuviri kudzivirirwa kweiyo iPhone yako kubva pakakwenya, matanga uye zvigunwe zvemunwe, zvakare kunoita kuti foni yako ichengeteke kubva mukukanganisa kana madonhwe akashata
Samsung S21 2.5D Yakazara Kavha Yakapfava Girazi Screen Screen Dziviriro
Yakadzikama Girazi rakakomberedzwa skrini inodzivirira yeSamsung S21, kujekesa kwakazara uye yakazara yekuvhara dhizaini, inopa kumucheto kumucheto kudzivirirwa kwefoni yako. Yakavandudzwa glue pamucheto, hazvisi nyore kudonha.
Samsung S21 2.5D Yakazara Glue Yakadzora Girazi Screen Dziviriro
Yakapfava girazi rakakomberedzwa screen screen inodzivirira yeSamsung S21, kujekesa kwakazara uye yakazara kufukidza dhizaini, inopa kumucheto kumucheto kudzivirirwa kwefoni yako.
iPhone 12 akateedzana 3D anti mabhakitiriya akatsamwa girazi screen mudziviriri
99% ANTI BACTERIAL RATE: Iyo inodzivirira firimu yechidzitiro inogadzirwa pahwaro hwesimba rekurwisa mabhakitiriya nesirivha ion, iyo inogona kutadzisa kukura kwehutachiona hunokuvadza, senge Escherichia coli, Staphylococcus aureus, nezvimwe.
iPhone 12 dzakateerana 3D rakakomberedzwa rakadzikama girazi screen mudziviriri
3D yakakomberedzwa Hasha dzeGirazi dzakanyanya kugadzirirwa dzakakombama nhare mbozha.
Yechokwadi 3D kuumba inobvumira iyo yakati sandara ndege kunge yakakombama, ichipa kukwana kwakaringana kwakakodzera kumativi ekumucheto zvigadzirwa.
iPhone 12 yakateedzana 3D resin kumucheto kwakadzikama girazi skrini inodzivirira
Paunenge uchishandisa yakadzikama girazi skrini inodzivirira kuchengetedza foni yako, Vanhu vanogara vachifunga kana vangawana girazi rinovadzivirira pasina dambudziko "Zviri nyore Kuputswa pamucheto".
Isa iyo OTAO 3D resin kumucheto girazi rakadzikama pachiratidziri, musanganiswa wakakwana weresin uye girazi, inopwanya mukati, iwe haungazonetseki pamusoro pemupendero wakaputsika!
iPhone 12 yakateedzana 2X inoputsika yakadzikama girazi screen mudziviriri
Chii chinonzi 2X shatterproof girazi?
Girazi rakadzikama rinogadzirwa neakasarudzika maviri akasimbisa maitiro mune yekugadzira maitiro ekuvandudza kuomarara uye kukanganisa kusagadzikana kwegirazi rakadzikama pacharo.Kuti riite rinogona kudzivirira mushe kutsemuka.
Kana isu tichitenga nharembozha nyowani, isu tinonyatsoda kunamatira yakadzikama girazi screen mudziviriri nehurefu hwakaoma uye yakasimba kukanganisa kusagadzikana. OTAO ine zano, kuti riwane iri nani skrini yekudzivirira mhedzisiro, kutora kaviri kusimbisa (2x shatterproof girazi) kuunza chiitiko chiri nani kune vatengi.
iPhone 12 dzakateedzana 2.5D yakazara chivharo chakadzikama girazi skrini inodzivirira
Iro zita rinoreva kutenderedza kubva kumucheto kwetafura ye "2D" kuratidzwa mu-z-axis, ichiwedzera kamu kashoma kune ingangodaro iri yakatwasuka yakatwasuka.
Paunenge uchishandisa 2.5D yakazara kavha yakadzikama girazi, Inogona kudzivirira kumucheto kweiyo yakadzora firimu kubva kukuvara.
iPhone 12 yakateedzana Camera Lens Mudziviriri
Kamera lens inodzivirira iyo inodzivirira malenzi kubva mukukwaya kana kukuvara nekudonha zvakadaro ichichengetedza iyo 100% kujekesa kwemufananidzo. Girazi rakagadzirwa nezvikamu zvishanu zvinovimbisa kuchengetedza kwakakwana uye kuita kwepamusoro kwekamera.
3 / F, Bldg B, Zhashi Industrial Park, # 16 Lixin Road, Danzhutou Nanwan, Longgang Dunhu, Shenzhen Guta, China